कांग्रेसबाट समानुपातिकमा छानिने ४० सांसद काे हुन् (हेर्नुहाेस् नाम सहित) – Setosurya
कांग्रेसबाट समानुपातिकमा छानिने ४० सांसद काे हुन् (हेर्नुहाेस् नाम सहित)
शनिबार २७, माघ २०७४
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा २३, समानुपातिकमा ४० सिट र राष्ट्रियसभामा १३ सांसदसहित नेपाली कांग्रेसको संघीय संसदमा ७६ सिट जितेको छ। राष्ट्रियसभाको चुनावपछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँडट गर्दै कांग्रेसले ४० सिट पाउने निर्णय गरेको छ।
संविधानको ८४ (८) अनुसार संघीय संसदमा प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोगले मतगणना सकिएको ६५ दिनपछि शुक्रबार समानुपातिकको सिट बाँडफाँट गरेको हो। सिट बाँडफाँट गर्दैै निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीबाट कम्तीमा २० जना महिलासहित ४० जना निर्वाचित गर्न शुक्रबार नै पत्र काटेको छ।
संघीय संसदमा कांग्रेसले पाएको ७६ सिटको एक तिहाइ अर्थात् २६ जना महिला हुनुपर्नेमा राष्ट्रियसभामा ६ जना महिला निर्वाचित भइसकेकाले निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई थप २० जना महिला अनिवार्य छनोट गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ भने कांग्रेसबाट एकजना पनि महिला निर्वाचित भएका छैनन्।
समानुपातिकाट नाम छनोट गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा क्रमसंख्या तलमाथि नगरी सातवटा क्लष्टरको अनुपात नाम छनोट गर्नुपर्ने छ ।
कांग्रेसले समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने कम्तिमा २० जना महिला छनोट गर्दा खस आर्य कोटाबाट ६ जनाले सांसद बन्ने अवसर पाउँछन्। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचिअुनसार यो क्लष्टरबाट सुजाता कोइराला, पुष्पा भुषाल गौतम, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, उमा रेग्मी र दीपशिखा शर्मा सांसद बन्नेछन्।
आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट पनि ६ जना महिलाले अवसर पाउनेछन्। बन्द सूचीको क्रम संख्यामा रहेका ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रमिला राई, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, हिरा गुरुङ, मीना सुब्बा र सुवर्ण ज्वारचनको नाम छनोट हुनेछ।
दलित कोटाबाट सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार सेवा र विमला नेपाली सांसद बन्नेछन्।
त्यस्तै, मधेसी क्ल्स्टरबाट रहेकी सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव र मिनाक्षी झा सांसद बन्ने निश्चित छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसको थारु वा मुस्लिम कोटामध्ये कुनै एउटा क्लस्टरबाट मात्र प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँछ। दुवै कोटाबाट एक/एकजना निर्वाचित गर्दा महिलार्फ जम्मा प्राप्त गरेको २० भन्दा धेरै हुने भएकाले थारु र मुस्लिममध्ये कुनै एकबाट एक जना छनोट गरिनुपर्छ। यसअनुसार थारु कोटाको पहिलो नम्बरमा रहेकी पार्वती डिसी चौधरी वा मुस्लिम कोटाको पहिलो सूचीमा रहेकी सर्वत आरा खानमध्ये एकजनाले सांसद बन्न पाउनेछन्।
पीछडिएको क्षेत्रबाट हुम्लाकी रंगमती शाही बन्ने पक्का छ।
कांग्रेसले पठाउने पुरुषतर्फका २० छनोट गर्दा खस आर्य कोटाबाट ६ जना पठाउनुपर्छ। क्रमसंख्याअनुसार बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी र मोहनप्रसाद पाण्डे सांसद बन्नेछन्।
आदिवासी जनजाती कोटाबाट बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, लालकाजी गुरुङ र जीपछिरिङ लामा र दिव्यमणि राजभण्डारी छनौट हुनेछन्।
दलित क्लष्टरबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मीनबहादुर विश्वकर्मा र प्रकाश रसाइली गरी तीनजना सांसद बन्नेछन्।
त्यस्तै मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी, स्मृतिनारायण चौधरी र नागेन्द्रकुमार राय सांसद बन्नेछन्।
कांग्रेसको थारु वा मुस्लिम कोटामध्ये कुनै एउटा क्लस्टरबाट मात्र प्रतिनिधि चयन गर्र्नुपर्ने अवस्था छ। थारु कोटाको पहिलो नम्बरमा रहेका पद्मनारायण चौधरी वा मुस्लिम समुदायबाट पहिलो नम्बरमा रहेका अतहर कमाल मुसलमानमध्ये एकजना सांसद बन्न पाउनेछन्।
पिछडिएको क्षेत्रबाट पुरुषतर्फ बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका अछामका रामबहादुर बिष्ट सांसद बन्न पाउनेछन्।
स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आमालाई दुई हजार भत्ता
कांग्रेसले ३४ जिल्लामा खटायो चुनावका कमाण्डर
गगनलाई दुईतीरबाट झट्का ! खेप्छन त २६ र २८ वर्षियाको चुनौती ?
यसरी ढुंगाका वर्षाको बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेरै छाड्यो एमालेले, हेरौं जनकपुर कार्यक्रमका पाँच तस्वीर !
संसदको अवरोध हट्यो, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई दियो धन्यवाद
विप्लवका केन्द्रीय सदस्य सहित दर्जनौं एमालेमा प्रवेश-ओलीले भने,एमाले देशकै ठूलो पार्टी भइसक्यो’
नयाँ शक्तिले उम्मेदवार टुंग्यायो/परिन् त करिश्मा ?
स्कूले बालक होस्टेलबाटै बेपत्ता
तपाईंलाई थाहा छ ? ट्वाइलेट सिटमा भन्दा पानी पिउने प्लाष्टिकको बोतलमा धेरै किटाणु
भोलीदेखि सवारी साधनबाट बाहिर फोहोर फाल्न नपाईने
तितो सत्यका कलाकार आर.पी भट्टराई रहेनन्
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले बाधकः मन्त्री खाँण
नेबिसंघको जिल्ला समितिलाई केन्द्रले बदर गरिदियो
पर्वतको कुस्मा पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने – वामपन्थीलाई जिताए कहिल्यै नाकाबन्दी हुँदैन
वार्ता लगत्तै माओवादी केन्द्रले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक
खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न ,देशभरको लोडसेडिङ आधा घन्टा कम हुने
पूर्वराजा एक्कासि किन पुगे भारत ! यस्तो छ भारतमा पूर्व राजाको तयारि